Kutaan kun bu`uura LibreOffice wajjin akka hojennu bu`uureessota nuuf kenna.
Bu`uurri lakkadda LibreOffice sagantaa xiqqaa fi fankishinii irratti hundaa`a isaan kunis kutaalee cita...dhuma cita fi fankishinii...dhuma fankishinii gidduutti ifteessamu. Tokkoon tokkoo citaa yookiin fankishinii citootaa fi fankishinoota biroo ni waamu.yoo ofeegannoo barreessuu lakkada dhortuu citaa yookiin fankishinii goote, sagantaalee biroo keessatti dabalataan akka tasaa gargaaramuu ni danda`ama.Dabalataa Adeemsa fi Fankishinoota ilaali.
Cita jechuun maali?
Citni unka gabaabaa sagantaa xiqqaa ta`ee, hojii xiqqoo sagantaa keessatti kan qabachuuf gargaaru dha. Subs are used to split a task into individual procedures. Sagantaa adeemsaa fi cita-adeemsaatti addaabuun dubbifammummaa dabaluu fi dogoggora xixiqqoo ni hir`isa. Citni morkalloota tokko tokko akka ulaagaa ni fudhata garuu gatii tokkolee gara cita yookiin fankishinii waamameetti hin deebissu, fakkeenyaaf:
Fankishiniin cita barbaachisaa ta`ee, kan gatii kennu dha. Fankishinii ibsa jijjiiramaa gama harka mirgaan gargaaramu ni danda`ama, yookiin bakka biroo iddoo baratamoo gatii ati itti gargaaramtu, fakkeenyaaf:
Hundataa fi qe`ee jijjiiramtootaa
Jijjiiramtootni hundataa muraa keessatti citootaa fi fankishinootaa hundaaf gataa`aa dha. Isaan kunis calqaba muraa irratti osoo citni yookiin fankishiniin hin calqabiin ibsamu.
Ibsi Jijjiiramtootaa cita yookiin fankishinii keessatti gataa`aa kan ta`u cita yookiin fankishinii keessatti duwwaa dha. Jijjiiramtootni kunis jijjiiramtoota hundataa Sadarkaa citoota yookiin fankishinii maqaa walfakkaataa irraa dhufuun maqaa fi jijjiiramtoota qe`ee walfakkaatuun ni faccisu.
Iddoo sagantaake akka adeemsaa fi fankishinootatti (citoota fi fankishinoota)tti addaan baastee, dabalataan piroojektii biraa keessatti gargaaramuuf adeeemsa fi fankishinoota kana akka faayilootaatti olkaa`uun ni danda`ama.Bu`uuri LibreOffice Muraa and Kuusota sagantaa. citootni fi fankishinootni yeroo hundaa muraa keessatti qabatamu.Muraan hundataa yookiin gosa galmeeti.Muraa baay`een kuusota sagantaatti ni makama.
Citoota, fankishinoota, muraa fi kuusota sagantaa faayilii tokko irraa gara birootti Maakroo qaaqa gargaaramuun jalteessuun yookiin siqsuun ni danda`ama.
Title is: Bu`uurota